Uumiga, qaboojinta iyo sublimation | Saadaasha Shabakadda
Marka hawo qoyan qabow ka hooseyso barta sayaxa, uumiga biyuhu wuu ururaa uumiga uumiga ku jira hawada. Nuuliyiintani mararka qaarkood waxay leeyihiin xidhiidh gaar ah oo xagga biyaha ah sidaa darteedna waxaa loo yaqaan 'hygroscopic'. Qaybaha milixda ee ku jira buufinta badda waxay ku dhacayaan qaybtaan waxayna sababi karaan uumiga ka hor inta qoyaanka qaraabada ah uusan gaarin boqolkiiba 100.
Jawiga dhexdiisa, qurubyo cayiman oo la hakiyay ayaa u shaqeyn kara sidii nukliyeerka habka qaboojinta. Qurub sababa koritaanka barafka barafka ku hareeraysan iyada oo lagu qaboojinayo biyaha hoosta ku jira a qaboojiye.
Uumiga biyaha sidoo kale wuxuu si toos ah ugu beddeli karaa kiristaalo baraf ah isagoon soo marin xaaladda dareeraha. Waa sublimation, erey sidoo kale loo adeegsado in lagu muujiyo isbeddelka rogroga, ee ah, barafka ilaa uumiga biyaha. Qeyb kasta oo ay ku samaysan karto baraf baraf sublimation waa a sublimation xudunta. In kasta oo khibrado badani jireen, haddana suurtagal ma ahayn in la caddeeyo in ay jiraan nukliyeer sublimation ah oo aan ka ahayn qaboojinta nuclei ee jawiga.
Filim dhuuban oo biyo ah ayaa marka hore ka samaysma dusha nukleus ka dibna wuu barafoobaa. Filimkani waa mid khafiif ah oo ay aad u adag tahay in la ogaado jiritaanka dhibcaha biyaha sidaa darteedna waxay u muuqataa in wax walba u dhacaan sidii haddii baraf baraf si toos ah looga sameeyay uumiga biyaha. Sidaa darteed, ereyga guud "meeldhexaadka udubdhexaadka ah" waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa saadaasha hawada ee dhammaan nukliyeerka sababa samaynta barafka.
Inta badan diirkadaha dhaxanta waxay u badan tahay inay ka yimaadaan dhulka, oo ay dabayshu ka soo baxdo noocyo qaybo ah. Waxay umuuqataa in walxaha dhoobada qaarkood door muhiim ah ka ciyaaraan waxayna u badan tahay isku dhafka kacsan inuu iyaga siin karo qaybsi isku mid ah oo isku mid ah ilaa dherer weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Uumiga, qaboojinta iyo sublimation
Sidee loo sharxayaa barta uumiga iyo koodh-siinta sublimation?
Dhererka, joogga, cabirka toosan iyo heerarka daruuraha